Erayga “cafis” macnihiisu waa sida looxa oo la nadiifiyey; Danbi dhaaf, deyn la daayey. Markaan qof qalad ku sameynno, waxaan raadinaa cafiskooda si xiriirkii loo soo celiyo, cafis lama hubo oo mudnaan laguma helo, qofna ma mudna in la cafiyo, cafisku waa ficil jaceyl, naxaxiis iyo dulqaad. Cafisku waa go’aan inaadan wax caloosha qof kale ugu qaadin, wax kasoo ay kugu sameeyeen
Haa, sidaasuu u sahlan yahay, kama ka shaqeysan karttid cafis ilaahay, cafis alle kama gadan kartid. Waxaad ku heli kartaa oo keliya iimaan allaha weyn naxariistiisa. Haddaad rabtid inaad Ciise Masiix oggolaatid inuu noqdo badbaadiyahaaga, kana heshid cafis ilaahay, waatan duco aad ku duceysan kartid, dhihidda ducadan iyo doco kale toonna kuma badbaadin karaan. Ciise Masiix oo aad rumeysaaa waa tan kaliya oo ku siineysa dunuubta oo lagaa cafiyo. Ducadani waa hab/qaab/jid keliya oo aad alle ugu sheegeysid saad u aaminsantahay, ugana mahad celineysid siduu kuu cafiyo..
“ilaahow” waan ogahay inaan dambi kaa galay, astaahilana ciqaab, laakiin Ciise Masiix baa qaatay ciqaabtaabtaan astaahilay si imaanka aan ku qabo ciise la iigu cafiyo, Adigaan ku rumeeyey sii aan u badbaado. Waad ku madsantahay sarreyntaadda/sharaftaada cajiibka ah iyo cafiska! Amiin.